WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka maalmood), waxaa qoray.Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare).
Home » Qormooyinka » WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka maalmood), waxaa qoray.Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare).	WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka maalmood), waxaa qoray.Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare).
05/04/2017	315 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa.
Waasuge wuu arkayaa waxaas oo dhan. Asagoo la yaabban siduu ugu sirmi tegay, niyaddana iska leh ‘ Reer magaalku sheekh la mood badanaa’!. Waasuge wuxuu umuurtaas ku xusuustay ninkii horay u yiri, “ haddaad magaalo tagto waxaad arkaysa:
Caalim faasaq ah,
Caami duub leh,
Carmal tima badan iyo
Carruur shaah leh.
Ayadoo sheekadii jaha la’dahay ayuu Dirir inta saacadda fiirshay, Warsame hoos ula hadlay, asaguna markiiba Waasuge u sheegay in Dirir Quraan la saarayo. Waasuge waxaa lagu marti qaaday inuu quraan akhriskaas ka qaybgalo, si wanaagsanna ay odayaashu maalintaas u sheekeystaan, maxaa yeelay, ayuu Warsame yiri “ waxaa lagu maah maahaa
‘ War sal ayaa looga dhargaa, biyana sacabbadaada,
Halkaas ayeyna iska raaceen labadii Oday iyo Dirir, waxaana la socday wiil yar oo u waday laba neef oo Ari ah oo ay suuqa kasoo iibiyeen. Wiilkii yaraa wuxuu Riyihii marsiiyay wadda Maxamuud Xarbi, maxaa yeelay, ma aqoon jidka loo maro wadda Hawlwadaag, shaqada xariglanimada oo ku cusub daraaddeed. Inta wiilku khaladkaas ku kacayo, Dirir iyo odayaashii waxay ku hawlanyihiin Waasuge oo inta xarig lugta u galay asagoo ka tallaabsanaya suuqa illinkiisa ku kufay. Goor dambe ayaa arrintii la ogaaday, oo Dirir wiilkii ka daba orday, odayaashiina ku yiri ‘hayga harina’. Waasuge dhibaato sidaas ihi ma gaarin, cagihiisa ayuuna halkii uga dhaqaaqay. Wuxuu Dirir saantii boobaba asagoo odayaashiina u cag dhigaya wuxuu wiilkii uga daba tagay isbeddelka baabuurta oo ag yaal tiyaatarka umadda. Nasiib darro, ayagoo aan iska daba imaan ayaa Tagsiile labadii riyood mid dhabarka ka jebshay, wiilkii yaraana inta jug siiyay garab wax ka gaarsiiyey. Waasuge iyo Warsame markii uu Tagsiiluhu dhibaatada geysanayey ayey inta meel fog ka arkeen saan boob dhiillo ku jirto, muddo gaaban kusoo gaareen meeshii shilku ka dhacay. Ardaydii dugsiyada, fanaaniintii Tiyaatarka iyo dadweynihii jidadka marayey intuba waxay kusoo urureen goobtii shilka.
Waasuge iyo Warsame markii ay arkeen dadka faraha badan ee Dirir ku hareeraysan, ayuu mid walba inta marada xaytay, ushiina la baxay, dagaal u diyaar garoobay. Iyadoo lasyku il daranyahay ayaa waxaa soo yeelay wiishkii Booliska Waddooyinka, markaasaa dadkii dib u wada gurtay, xaajadiina raggii iska lahaa la wareegay. Tagsiilihii waxay Boolisku amreen inuu wiilka iyo rida dhaawaca ah baabuurka ku qaado, waxaana laysku raacay xafiiska Booliska Waddooyinka.
Intii aan goobtii laga dhaqaaqin ayuu Dirir odayaashii ku yiri “Aqalkii sii taga oo sii geeya Rida aan dhaawaca ahayn”. Odayaashii hadalkaas ma aqbalin, sababta ay ku diideenna waxaa ka maahmaahay Waasuge oo yiri “Dirirow, wixii layska sheegtaa ama laysku sheegtaa waxay u baahanyihiin shan waxyaalood:
Nin lagu sheegto,
Shahaado marag fura,
Skeeh xugmiya iyo Sharkamatiire fuliya.
La soco Qeybta 17-aad, Berri haddii Alle idmo. WAXAA QORAY:
DR. XUSEEN SHEEKH AXMED (KADDARE
Previous: Ogow sababta dib u soo noolaysay burcad-badeedda- (xog muhiim ah)
Next: Akhriso:- Askari Qof shacab Ah Ku Dilay Magaalada Garoowe